ကျွန်တော်ပြောသောစင်္ကပူ - အပိုင်း - ( ၁၉ ) — Steemit
ကျွန်တော်ပြောသောစင်္ကပူ - အပိုင်း - ( ၁၉ )
kachinhenry (65) in myanmar •9months ago
မင်္ဂလာပါ။ ယခင် ဆောင်းပါးတွင် ကျွန်တော်တို့ သင်္ဘောကျင်းအလုပ်သမားတို့ ပြောကြသော broken English အကြောင်းအား ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဆောင်းပါးတွင် ကျွန်တော်တို့ ငြမ်းအလုပ်သမား များ ၏ ဝင်ငွေ အခြေအနေနှင့် ပါတ်သက်သော အကြောင်းအရာများအား ဖေါ်ပြပေးလိုပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ စင်္ကပူ စရောက်ကာစတွင် အရင်ရောက်နှင့် နေကြသော မြန်မာ အကို ကြီးများက မိမိတို့တွင် အိမ်ထောင်ကျပြီး သူများ ပါသလော နှင့် တရပ်ကွက်တည်း အိမ်နီးချင်း သူငယ်ချင်းများ ပါသလော မေးကြပါသည်။ ထို့နောက် ထို senior အကိုကြီးများက " ညီလေးတို့ ရတဲ့ လစာကို ချင့်ချိန်ပြီး ပို့ကြ အရမ်း မပို့ကြနှင့် " ဟူ၍ သတိပေးပါသည်။
ထိုအချိန်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း အဘယ့်ကြောင့် ထိုသို့ သတိပေးကြသည်ကို နားမလည်ခဲ့ကြပါ။ အလုပ်လုပ်၍ ၆ လ ၁ နှစ်ကြာသော အခါမှ သဘောပေါက်လာကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ငြမ်းသမား များ အကြောင်းဆက်ပါအုံးမည်။ သင်္ဘောကျင်းတွင် ငြမ်းဆင်ကြသော အလုပ်သမားတို့ မှာ အခြားသော အလုပ်သမားများနှင့် လစာရပုံ ခြင်းမတူညီကြပါ။
အခြား အလုပ်သမားများမှာ အခြေခံလစာများ ပေးထားကြပြီး အပို ဝင်ငွေဟူ၍ အချိန်ပို over time ဆင်းရသော ဝင်ငွေများရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ငြမ်းအလုပ်သမားများမှာ ထိုသို့ မဟုတ်ပါ။ မိမိ တို့ professional ဖြစ်ပါပြီ ဆိုကတည်းက ကုမ္ပဏီ နှင့် စာချုပ်ချုပ်ရပါသည်။ ထိုစာချုပ်မှာ မိမိတို့သည် အခြေခံလစာ ပေါ်တွင် ပိုက်ဆံမရပဲ မိမိတို့ တပ်ဆင်သော ငြမ်းပျဉ်ပြား အချပ် အရေအတွက်ပေါ်တွင် မူတည်၍ ပိုက်ဆံရယူပါမည် ဟူသော သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ ငြမ်းဆင်၍ ပျဉ်ပြား ခင်းလိုက်လျင် ပျဉ်ပြား တပြားအား တပ်ဆင်ခ အဖြစ် 4$ ရရှိမည် ဖြစ်သလို ထိုငြမ်း ပြန်ဖျက်လျင် ဖျက်ခ အတွက် ပျဉ်ပြား တပြားလျင် 2$ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သည် တနေ့လုံး ငြမ်းဆင်ထားသော ပျဉ်ပြား အရေအတွက် ၁၀ ပြားသာ ရှိလျင် ဒေါ်လာ 40$ ရရှိမည် ဖြစ်၍ ထို 40$ အား အဖွဲ့ဝင် ရှိသလောက် ခွဲဝေယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ငြမ်းအဖွဲ့ တဖွဲ့လျင် အနည်းဆုံး လူ ၅ ယောက်မှ အများဆုံး ၁၀ ယောက်ခန့်ရှိပါသည်။
ထိုအချိန်တုန်းကတော့ ကျွန်တော့အဖွဲ့တွင် ၈ ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ငြမ်ဆင်ပြီးလျင် ငြမ်းဆင်ပြီး ကြောင်း form ဖြည့်၍ ထိုငြမ်းတွင် ပျဉ်ပြား မည်မျှ ရှိကြောင်း ဘယ်အဖွဲ့ မှ တပ်ဆင်ကြောင်း သင်္ဘောကျင်း နှင့် သင်္ဘော အမည် ၊ ငြမ်းဆင်သော နေရာ စသည်တို့ကို ဖြည့်သွင်းရပါသည်။ တာဝန်ခံ supervisor မှ ထိုငြမ်းအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ကြောင်း လက်မှတ်ထိုး၍ ရုံးချုပ်သို့ စာရင်းတင်ပေးပါသည်။
ဤသို့ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် လုပ်ရသော ငြမ်း order form များအား ရုံးချုပ်မှ တွက်ချက်၍ မိမိတို့အား ၁၅ ရက်တကြိမ် လစာအနေဖြင့် ငွေပေးချေပါသည်။ ကျွန်တော်၏ ယခင် ဆောင်းပါးများတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့် အတိုင်း အဖွဲ့တွင် လူညီ ၍ အားလုံး ကြိုးကြိုးစား စား လုပ်လျင် အလုပ်ပြီးသလောက် ပျဉ်ပြားပိုရ၍ ဝင်ငွေလည်း ပိုရနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ မဟုတ်ပဲ အလုပ်ခိုကပ်သူ များပါလာပါက အလုပ်မပြီး ရရှိသော ပျဉ်ပြားနည်း၍ ပိုက်ဆံခွဲဝေယူသော အခါ အားလုံး တန်းတူ ရကြသည် ဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူကလည်း မြင်လာကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ ခိုကပ်သူကလည်း ဒီလောက်ရ တကယ်ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ရသူကလည်း ဒီလောက်ပဲရ သည်ဟူ၍ အလုပ်ကြိုးစားလို စိတ်များ ပျောက်သွားတတ်ပါသည်။
အဖွဲ့ တဖွဲ့တွင် အလုပ်ခို ကပ်သူ ၄ ယောက်ခန့်ပါလာလျင် သေချာပေါက် ထိုအဖွဲ့မှာ အချိန်ပြည့် ရန် ဖြစ်နေကြရမည် ဖြစ်သော အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ တွင်လည်း ထို အတိုင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့တွင် လုပ်သား ၈ ယောက်ရှိသော်လည်း တကယ် အလုပ်ကြမ်းလုပ်နိုင်ကြသူများမှာ ၄ ယောက်ခန့်သာရှိပါသည်။ ကျန်၂ ယောက်မှာ သာမန်သာ ဖြစ်၍ အခြား ၂ ယောက်မှာ ယောင် ခြောက်ဆယ်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်တကယ် လုပ်တော့မည် ဆိုလျင် အိမ်သာ သွားတက်နေသူ ၊ ရေသွားခပ်နေသူ အခြားသူများ ပစ္စည်း သယ်ယူပြီး ငြမ်းဆင်တော့မည် ဆိုမှ ဟိုနား နည်းနည်း ဒီနား နည်းနည်း ဝင်ယောင် စသည်ဖြင့် အခြားအဖွဲ့သားများကလည်း ရန်ဖြစ်မည် စိုးသောကြောင့် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သော ကျွန်တော့အားသာ ဘုတောကြပါတော့သည်။
ကျွန်တော်ကလည်း နဂို ကတည်းက ဂျစ်တီးဂျစ်ကန် နှင့် ပြောစရာရှိလျင် နာ အောင် ပြောတတ်သောကြောင့် ထို့ အလုပ်ကပ်သူများ ဖြင့် အမြဲ တမ်း တကျက်ကျက် ရန် ဖြစ်နေရလေ့ရှိပါသည်။ ဒေါသထွက် လွန်းမက ထွက်လာလျင်တော့ ကိ်ုယ်ထိ လက်ရောက်ထိုးကြိတ်ကြပါတော့သည်။ သို့သော်လည်း ဤသို့ ထိုးကြိတ်ရန် ဖြစ်တိုင်း မည်သူမျှ ရုံးချုပ်သို့ မတိုင်ကြပါ။ အကြောင်းမှာ နှစ်ယောက်စလုံး ပြန်ပို့ ခံရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ ငြမ်းအဖွဲ့သားများ၏ လစာပေးပုံ ကို အကြမ်းဖျင်း ဖေါ်ပြပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ငြမ်း သင်တန်း ဆင်း၍ သင်္ဘောကျင်း များတွင် ပထမ ၃ လ training သဘောအနေဖြင့် ငြမ်းဆင် ငြမ်းဖျက် လုပ်ကြရပါသည်။ ထို training ကာလတွင် အခြေခံလစာ $500 ပေးထားသည် ဖြစ်၍ ငြမ်းအား ဖြေးဖြေးဆင် ဖြေးဖြေးဖျက် လည်း ကိစ္စမရှိသလို ခိုကပ်သူများအားလည်း သိပ်ပြီး ဂရုမစိုက်ကြပါ။
အချိန်တန်လျင် လစာ ရမည် ဖြစ်သော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထို training ကာလ လွန်ပြီး၍ ငြမ်း professional စာချုပ်ချုပ်ပြီးလျင်တော့ မိမိတို့ လုပ်အားကိုသာ အားကိုးရတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်မိပါသေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ စာချုပ်ချုပ် ကြသော အချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ မှာ သင်္ဘောကျင်း အသေးလေးတခုတွင် ငြမ်းဆင်နေကြသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ရုံးချုပ်မှ HR ရောက်လာ၍ စာချုပ်များပြ၍ မိမိတို့ professional စာချုပ်ချုပ်ရတော့ မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် ကရင်လေး ၊ မွန်းလေး ၊ ဇမ်ကြီး ( ချင်း တိုင်းရင်းသား ) တို့က ကျွန်တော့အား သတိပေးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့တွင် အညာသား တယောက်နှင့် ရန်ကုန်သား ၃ ယောက်ပါပါသည်။
ဇမ်ကြီးတို့က ထိုရန်ကုန်သား အလုပ်ကပ်သူများ ဖြင့် တဖွဲ့တည်း မလုပ်လို မိမိတို့ သီးခြား အဖွဲ့ ဖွဲ့ မည် ဖြစ်လာပါသည်။ ထို အချိန်တုန်းက ကျွန်တော်တို့မှာ လူသစ်များ ဖြစ်၍ အနည်းဆုံး ငြမ်းလုပ်သား ၈ ယောက်ပြည့် မှ အဖွဲ့ ဖွဲ့ခွင့် ပေးပါသည်။ ၅ ယောက်နှင့် အဖွဲ့ ဖွဲ့ မရပါ။ အကြောင်းမှာ အဖွဲ့ မှ ထုတ်ခံရသူသည် အခြားမည်သည့် အဖွဲ့မှ မလို ချင်သဖြင့် ရုံးချုပ်မှ သူတို့ အတွက် သီးခြား အလုပ်ရှာ မပေးနိုင်သော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် ထို ရန်ကုန်သားများကလည်း မင်းတို့က ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လို့လဲ နှင့် စကားများကြပါတော့သည်။
HR ကလည်း ရုံးချုပ်သို့ ဖုန်းဆက်၍ မန်နေဂျာ အား ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ မဖွဲ့လိုကြောင်းနှင့် ရန်ဖြစ် နေကြကြောင်း တိုင်ပါတော့သည်။ ထို့နောက် HR မှ ကျွန်တော့အား ဖုန်းပေး၍ မန်နေဂျာက စကားပြောလို ကြောင်း ပြောပါသည်။ ကျွန်တော် နားထောင်လိုက် သည်နှင့် တဖက်မှ မန်နေဂျာ ပြောသည်မှာ " မင်းတို့ အဖွဲ့ စာချုပ်မှာ လက်မှတ် မထိုးချင်ရင် ရုံးချုပ်ကို လာပြီး လေယျဉ်လက်မှတ်လာယူ မြန်မာပြည် ပြန်ဖို့ လုပ်တော့ " ဟူ၍ ပြောပြီး ဖုန်းချသွားပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း အဖွဲ့သားများအား ရှင်းပြရပါတော့သည်။ " မြန်မာပြည်ပြန်မည်လော အဖွဲ့ ဖွဲ့၍ အလုပ်လုပ်ကြမည်လော"။ မည်သူမျှ မပြောသာတော့ပါ။ အားလုံး အောင့်သက်သက်နှင့် လက်မှတ်ထိုးကြရပါတော့သည်။ မှတ်မိပါသေးသည် ကျွန်တော် တို့ အဖွဲ့မှ ဇမ်ကြီးကတော့ သူလက်မှတ် ထိုးမည့် နေရာတွင် လက်မှတ် မထိုးပဲ မြန်မာလို ( -ီးပဲ ) ဟူ၍ ထိုးပေးလိုက်ပါသည်။ ထို့ နောက် HR မှ စာချုပ်များယူပြီး ပြန်သွားပါတော့သည်။ ထိုနေ့မှ စပြီး မိမိတို့လည်း စင်္ကပူ ငြမ်းလုပ်သားဘဝဖြင့် မိမိတို့ ပိုက်ဆံကို ချွေးနှင့် ရင်း၍ ရှာကြရပါတော့သည်။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ ၏ ပထမဆုံး professional လစာမှာ တယောက်ကို 120$ သာရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဤသို့ ဖြင့် ရန်ဖြစ်လိုက် ငြမ်းဆင်လိုက် ပြသနာတက်လိုက် ဖြင့်သင်္ဘောကျင်း တကာသို့ သွား၍ ငြမ်းဆင်ခဲ့ရပါသည်။ ဤတွင် ကြုံ၍ အထက်တွင် senior အကိုကြီးများ များပြောသော ပိုက်ဆံ အရမ်း ပြန်မပို့ကြနဲ့ ဟူသော အကြောင်းကို ရှင်းပြလိုပါသည်။
ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့မှာ လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်ဖြင့် တလကို ငြမ်းဆင် ခ လစာ 400$ ခန့် ရရှိချိန်တွင် အခြားသော လူညီ သော အဖွဲ့များမှာ 700$ 800$ စသည်ဖြင့် ရရှိနေကြပါသည်။ အခြားအဖွဲ့မှ ကရင် တယောက်နှင့် ကျွန်တော့ အဖွဲ့မှ ကရင်လေး မှာ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည့် အပြင် အိမ်နီးချင်းလည်း ဖြစ်ကြပါသည်။
ထိုကရင်က တလလျင် ၁၀ သိန်း ပို့နိုင်သော အခါ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့မှ ကရင်လေးက ၅ သိန်းသာ ပို့နိုင်ပါသည်။ ပိုက်ဆံ ပို့တိုင်းလည်း ကရင်လေးက သူ့အိမ်နှင့် ပြသနာ ဖြစ်ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ စင်္ကပူ ကို တရက်တည်း အတူတူ သွားကြသည် ကုပ္မဏီ တခုတည်းတွင် အတူ လုပ်နေကြရသည် လုပ်နေသော အလုပ်ကလည်း ငြမ်းအလုပ်ချင်းလည်း တူကြသော်လည်း အခြားသူက ၁၀ သိန်း ပို့ နိုင်၍ သူကတော့ ၅ သိန်းသာ ပို့နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် ရှိနေသူများက ဤအခြေအနေကို နားလည်ကြမည် မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီ တူ အလုပ်တူ လျင် တန်းတူရကြမည်ဟုသာ ထင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိန်းမ ရှိသူများကလည်း ဤအတိုင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ပထမ သုံး လေး လ တွင် အလုပ်ကောင်း၍ ပိုက်ဆံများများ ပို့နိုင်သောအခါ ပို့ထားကြသော်လည်း အလုပ်မကောင်း၍ ပိုက်ဆံပို့ နည်းလာလျင် အသုံး အဖြုန်း ကြီးလာသည် ၊ စင်္ကပူ တွင် အငယ်အနှောင်း ရှိနေပြီ လော စသည်ဖြင့် ရန်ဖြစ်ကြရပါတော့သည်။
အကြောင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ငြမ်းအလုပ်သမားများ၏ လစာမှာ အခြားသူများကဲ့သို့ ပုံမှန် ပုံမှန် အခြေခံလစာမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကတော့ အလုပ်ကောင်း၍ ပိုက်ဆံများများရ သဖြင့် အသုံးအဖြုံန်းကြီးလာကြသူများ ရှိသလို ရသမျှ ပိုက်ဆံ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်စု ကြသူများလည်း ရှိကြပါသည်။ ဤ ငြမ်းအလုပ်သမားများတွင် ထက်အောင်ကျော်ဟူသော အလုပ်သမားလေး အကြောင်းကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါသည်။
ကျွန်တော် Supervisor ဖြစ်လာ၍ သင်္ဘောကျင်း တခုအား စီမံအုပ်ချုပ်ရသောအချိန်တွင် သူနှင့် တွေ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထက်အောင်ကျော်မှာ စင်္ကပူ တွင် ငြမ်းအလုပ်သမား အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေသော်လည်း စင်္ကပူ နိုင်ငံ ဘယ်နေရာမှ မရောက်ဘူးပါ။ အလည်အပတ်လည်း မထွက်ပါ။ သူသွားတတ်သော နေရာမှာ စင်္ကပူရှိ မြန်မာပြည်သို့ ပိုက်ဆံလွဲပို့သော နေရာ တနေရာသာရှိပါသည်။ ကျန်အချိန်မှာ အလုပ်နှင့် အဆောင် အတွင်းသာရှိပါသည်။
အလုပ်ပိတ်ရက် ဖြစ်၍ အခြားသူများ လျှောက်လည်ကြလျင်လည်း ဘယ်မှ လိုက်မသွားပါ။ ဆေးလိပ် ကွမ်းယာ လည်း မသောက်မစားသလို အပို အဖြစ် မုန့်ပဲ သရေစာပင် ဝယ်မစားပါ။ အဆောင်မှ ပေးသော ထမင်းဟင်းသာ စားပါသည်။ ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း ရသမျှ ပိုက်ဆံ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်စု၍ သုံးနှစ်ခန့် စင်္ကပူတွင် အပင်ပန်းခံ အလုပ်လုပ်သွားပါသည်။
သူပြန်ခါနီး ကျွန်တော့အား နှုတ်ဆက်သောအခါ စင်္ကပူလာတာ ပိုက်ဆံရှာ ဖို့သာ ဖြစ်၍ ယခု သူ့တွင် လယ်ဧက တော်တော်များ များ ဝယ်ထားသည့် အပြင် နွား အကောင် ၂၀ ကျော်လည်း ဝယ်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာပြည် ပြန်၍ တောင်သူ လုပ်တော့မည့် အကြောင်း ပြောပြပါသည်။
ကျွန်တော်ပြန်လာလျင် သူ့ထံလာလည်ပါမည့် အကြောင်း ပြော၍ နှုတ်ဆက်ပြန်သွားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် စင်္ကပူ တွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ထက်အောင်ကျော်ကဲ့သို့ ပိုက်ဆံကြိုးစားစုသူ များ တွေ့ဘူးသလို ရသမျှ သုံးဖြုန်း လိုက်သဖြင့် လက်ဗလာဖြင့် အိမ်ပြန်သွားရသူ အများအပြားလည်း တွေ့ဘူးပါသည်။
9 months ago by kachinhenry (65)
sawlwin (58) ·9months ago
သူများနိုင်ငံမှာ လုပ်ရတာ မလွယ်ပါလားဗျာ ... အခက်အခဲကြားကနေ နေရာတစ်ခုရလာတာ ကိုဟင်ရဲ့အောင်မြင်မှုပါ
kachinhenry (65) · 8 months ago
အောင်မြင်နေတယ်လို့တော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ခုထိ ပညာရှာနေရဆဲပါ။
ခုမှပဲကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တော့တယ်ကိုဟင်ရေ။ နောက်လာမယ့်သူတွေ ကောင်းကောင်းသိရတာပေါ့။
အကုန်လုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ တချို့ အခြေခံလစာရရှိ တဲ့သူကြတော့လည်း ပုံမှန်လေး ပို့နိုင်တာပေါ့ဆရာ...။
aungzawhtwe (61) ·9months ago
ထက်အောင်ကျော်လို ပိုက်ဆံစုတာ သဘောကျသလို ဇမ်ကြီးရဲ့ လက်မှတ်ထိုးနည်းကလည်း မိုက်သားပဲ😁😁😁
ဇမ်းကြီး အကြောင်းကို နောက်ဆောင်းပါးတွေမှာ ဖေါ်ပြပေးပါ့မယ်။
tharpauk (53) ·9months ago
သူများနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ရတာမလွယ်တဲ့အပြင် ကိုယ့်အဖွဲ့ကပါ မညီတော့ တော်တော်ခက်ခဲခဲ့မှာပေါ့ဗျာ
အဲဒီ အချိန်တုန်းကတော့ စိတ်ပျက်မိတာအမှန်ပဲ။ အလုပ်လုပ်ရတာ တရက်မှ ပျော်တယ် မရှိခဲ့ဘူး။
myothuzar (53) ·9months ago
အလုပ်မှာခိုကပ်တတ်တဲ့ သူတွေနဲ့တွဲလုပ်ရတာ စိတ်ညစ်စရာပဲနော်။ပိုက်ဆံလည်း သူများလောက်မရ။
စိတ်ညစ်တာထက် စိတ်ပါပျက်လာကြတာ။ အလုပ်လုပ်တော့မယ် ဆိုရင် ရန်ဖြစ်ရတာက အရင်။
nyonyoshein (50) · 8 months ago
ပိုက်ဆံစုတာတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အတုယူစရာပါ သား
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အန်တီ။
သြော် … ဒီကလုတွေကတော့ နိုင်ငံခြားသွား အလုပ်လုပ်တယ်လို့ဘဲ သိထားကြတာ အဲ့လို ရုန်းကန် ရှာဖွေ နေကြ ရတာပါလား
အကုန်လုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ တချို့ အခြေခံလစာရရှိ တဲ့သူကြတော့လည်း ပုံမှန်လေး ပို့နိုင်တာပေါ့။
billionairehein (62) ·9months ago
သူများနိုင်ငံသွား အလုပ်လုပ်ပြီး ခိုကပ်နေရင်တော့ ဘယ်လိုကြီးပွား
နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး ငွေမစုမိမှတော့ အလကားလူသက်သက်သာပဲ။
ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ... နောက်ဆောင်းပါးတွေမှာ အဖြုန်းကြီးတဲ့သူတွေ အကြောင်း ဖေါ်ပြပေးပါ့မယ်။
nweoomon (51) ·9months ago
ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတလဲရတယ်။ မှတ်သားစရာတွေလဲပါတယ်
တခုခုရသွား တယ်ဆိုရင်ပဲ ဝမ်းသာလှပါပြီ။
aungthetpysoe (32) · 8 months ago
မှန်တာပြောရရင်တော့ ဘယ်သူမှ သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်ကြမ်း မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ မတတ်သာလွန်းလို့ပါ။
aunggyi100 (54) ·9months ago
အိုးပစ်​အိမ်​ပစ်​ မိသားစုပါပစ်​ထားရပြီးသူများနိုင်​ငံထိပိုက်​ဆံရှာသွားကြရတာ ထက်​​အောက်​​ကျော်​လို ကြိုးစားစုပြီးအပြန်​အိမ်​ပါ​အောင်​သယ်​သင့်​တယ်​ ထင်​တာဘဲကိုဟင်​​ရေ
ဟုတ်တာပေါ့ ကို အောင်ကြီးရေ... နောက်ဆောင်းပါး တွေမယ် အဖြုန်းကြီးတဲ့သူတွေ အကြောင်း ဖေါ်ပြပေးပါ့မယ်။
htwegyi (58) ·9months ago
လူအမျိုးမျိုးနဲ့ တွေရတာပဲဗျာ ထက်အောင်ကျော်လိုလူကတော့ရှားမှာပ ကိုဟင်
တကယ်ပြောရရင်တော့ အဲတယောက်ပဲ တွေ့ဘူးသေးတယ်။ အခြားသူတွေကလည်း စုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားအသုံး လေးတွေရှိကြတယ်။ ထက်အောင်ကျော်ကတော့ ဖုန်းတောင် ဝယ်မကိုင်ဘူး။
theinzawlin (51) ·9months ago
ကိုထက်အောင်ကျော်လို လူမျိုးရှားမယ်နော် အစ်ကို
sanaung53 (43) · 8 months ago
အကို့စင်္ကာပူအတွေ့အကြုံလေးကိုဖတ်ရတာဗဟုသုတရပါတယ်။သူများနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ရတာမလွယ်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော့အကိုတစ်ယောက်တောင် ကိုရီးယားမှာ အလုပ်သွားလုပ်တာအရမ်းပင်ပန်းတယ်တဲ့ သူလည်းအဲ့လိုပဲ ပိုက်ဆံစုမိတာနဲ့တန်းပြန်လာတာ။
အကောင်းဆုံးပါပဲ။ စုမိဆောင်းမိ ပြီး ကိုယ့် ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်မဲ့ အရင်းနှီးရရင်တော့ ပြန်လာသင့်ပါတယ်။
zzawzawhtwe (51) ·9months ago
ကိုယ်မရောက်နိုင်တဲ့နေရာက အကြေင်းအရာနဲ့ အတွေ့အကြုံရမိတယ်
တခုခု ရသွားရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။
ဘယ်နေရာနေနေ စုတက်ဆောင်းတက်မှ အသုံးနဲ့ အဖြုန်းမခွဲတက်တဲ့သူအတွက်တော့ ဆင်းရဲခြင်းပင်လယ်ဝေနေမှာဘဲ ကိုဟင်
Your author is very beautiful. Which readsalot.
ladysteem2 (30) · 8 months ago
zawhtat (45) · 8 months ago
သူများနိုင်ငံမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ပီး ငွေရဲ့တန်ဘိုးကို သိလို့ ကောင်းကောင်းစုနိုင်သူတွေ ကို လေးစားတယ်ဗျာ။ မြန်မာပြည်ပြန်လာပီး တောင်သူပြန်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံချစ်စိတ်လေးတော့ အားကျတယ်။